Bongolava: efa tonga ny helikoptera hanenjika dahalo | NewsMada
Bongolava: efa tonga ny helikoptera hanenjika dahalo
Manoloana ny tsy fandriampahalemana miseholany any amin’ny faritra Bongolava, nisy ny hetsika manokana nataon’ny zandary, miaramila ary ny mpiray dina mba hamongorana ny asan-dahalo amin’iny faritra iny. Nisy, araka izany, ny fijerena ireo kizo fieren’ny dahalo sy fanafenan’izy ireo ny omby halatra, toy ny ao Bezavona izay efa malaza ratsy any an-toerana, eo anelanelan’i Miandrivazo sy Tsiroanomandidy. Miisa 85 ireo omby tratra tao amin’io toerana nandritra ny fisafoana nataon’ireo mpanao fanarahan-dia. Nahitana dahalo ihany koa tao amin’io toerana io, saingy tafaporitsaka tampoka nony tonga ny mpitandro filaminana.
Tonga ny faran’ny herinandro teo, ireo omby very ireo ka nampidirina fourrière ao amin’ny tsenan’omby miandry ny tompony. Nanamafy hatrany kosa ny teo anivon’ny mpitandro filaminana fa mila taratasy mazava ho an’ireo olona tonga hijery ny ombiny ao an-tsena.
Mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana manoloana ny firongatry ny asan-dahalo any amin’iny faritra Bongolava iny. Efa tonga ao Bongolava ny helikoptera hanampy ireo mpitandro filaminana amin’ny fanenjehana ireo dahalo.